> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: 2011
စိနျလိုလကျနတေဲ့ ဇီဇဝါပနျးမြား မှေးခဲ့လို့
မိုးတဖြောကျဖြောကျ နတှေ့ေ ကုနျလှနျနိုငျခဲ့။
ခငျခငျပြိုရေ၊ စောငျ့ခဲ့တယျ။ ။
၂။ ခငျခငျပြိုရေ ငါ့ဘဝ သမိုငျးတဈလြှောကျ
ဂူကွီးထဲမှ မီးတုတျကိုငျ ထှကျလာသလို
ငါ စောငျ့ခဲ့တယျ။ ။
၃။ ခငျခငျပြိုရေ မှတျတမျးတဈရှကျ
အဝီစိက ခုမှ တကျလာသလို
ဒီဘဝမှာ ဒီမှာ မငျးကိုယျနံ့ကို ငါ တောငျ့တလို့။
၄။ ခငျခငျပြိုရေ ပိုကောငျးတဲ့ကဗြာ
ငါက ဟိုလူ့ပွောပွ ဒီလူ့ပွောပွ။
မိနျးကလေးရေ .,.၊ အလုပျတှေ မြားနသေလား
၅။ ခငျခငျပြိုရေ ငါ့အကွောငျး
ငါတို့ နနေသေော နရေ့ကျမြားဟာ
ထပျ၍ ထပျ၍ အလိုရှိခဲ့ကွ။
ပွီး၊ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ။
တကျတူးထိုးဖို့ လိုဦးမလား !
၆။ ခငျခငျပြိုရေ မပွီးသေးသော ပနျးခြီကား
၇။ ခငျခငျပြိုရေ ခတျေအဆကျဆကျ မတ်ေတာဖွငျ့
ပါလာသညျ့ ကောငျးမှု၊ မကောငျးမှု
၈။ ခငျခငျပြိုရေ ငါတို့အနီးမှာ
'၀' မှ '၁' နှငျ့ '၂' သို့
'၃' နှငျ့ '၄' သို့။
၉။ ခငျခငျပြိုရေ ဒီလိုအခြိနျတှေ
နစေ့ဉျ တကျတကျကွှကွှ ရုံးသှားတဲ့ ရုံးစာရေးမြား
၁၀။ ခငျခငျပြိုရေ ငါ စောငျ့ခဲ့ရ
ယနေ့ အမှား ဘယျနှခုဟု
ယနေ့ အမှနျ ဘယျနှခုဟု
ငါ့အဖွကေို ငါ စောငျ့ခဲ့ရ
ငါ့စာရငျးကို ငါ စောငျ့ခဲ့ရ။
ငါ စောငျ့ခဲ့ရ။ ။
၁၁။ ခငျခငျပြိုရေ ချေါကွိမျမြား
ကမျးမမွငျ ငှကျမမွငျ ပွငျကယျြကွီးထဲ
ငါ မွုပျတော့မယျ …
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မကွား။
၁၂။ ခငျခငျပြိုရေ ကဗြာတဈပုဒျ
ငါ ဒီစာမကျြနှာမှာ စဉျးစားတယျ။
၁၃။ ခငျခငျပြိုရေ ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကလေး
အနုပညာနဲ့ နစေ့ဉျ ငါနခေဲ့သလို။
ပလကျဖောငျးအကယျြကွီးနဲ့ ငါတို့ မွို့ရဲ့လမျး
ခြောငျးကွညျ့ပေါကျကလေးတဈပေါကျ ရှိတဲ့ အထပျခိုးလေး
ပွိုငျတူ ကတုနျကယငျ ဖွဈရတဲ့ အသကျအရှယျ
၁၄။ ခငျခငျပြိုရေ ရေ အသကျရှူငှမြေ့ား
သဈသားအိမျကလေးရှေ့ ရောငျစုံပူဖောငျးတှေ လှငျ့လို့
ငါတို့ ဘယျရထားမှာ လှဲခဲ့လဲ
တဈခါလှဲရငျ နှဈပေါငျးဘယျလောကျ ကွာတတျလဲ။
၁၅။ ခငျခငျပြိုရေ သီခငျြးတဈပုဒျ
တဈယောကျတညျးနဲ့လညျး ညညျးလို့ရတယျ မဟုတျလား။
၁၆။ ခငျခငျပြိုရေ မငျး ပွောပွရလိမျ့မယျ
ဒုက်ခဆိုလညျး ဒုက်ခ၊ ပြျောရှငျမှုဆိုလညျး ပြျောရှငျမှု
အမှနျတရား ကိုလညျး ညီတူညီမြှ
ငါ့မှာက ရ မရ
၁၇။ ခငျခငျပြိုရေ အားနာပါတယျ မိနျးကလေးရယျ
၁၈။ ခငျခငျပြိုရေ အဖျောကှဲသူ
ငါဟာ အရူးတပိုငျး ကပွ။
၁၉။ ခငျခငျပြိုရေ ကသဈပနျးတှေ ပှငျ့ပေါ့
ရှုံးလို့ ရှုံးမှနျး မသိ
ခငျခငျပြိုရေ၊ ကသဈပနျးတှေ ပှငျ့ပေါ့။
၂၀။ ခငျခငျပြိုရေ စောငျ့ခဲ့တယျ
တဈရကျကို ငါ ဘာလို့ မစောငျ့နိုငျရမှာလဲ
သူက ပွောစရာမရှိတော့သော ယတိပွတျမှုကို
၂၀၁၁ ခုနှဈ၊ မလေ
Posted by Thi Ha Thu at 9:01 PM
စနေ နတေ့ဈဝကျ (၁၂)
တဈကွော့ပွနျလညျလာတဲ့ ဒီဇငျဘာရဲ့ ဧညျ့ခနျးနံရံမှာ
အဘကျဘကျကို လှငျ့စငျသှားတဲ့ မျောလီကြူးတိုငျးမှာ
အိမျပွနျခငျြတဲ့ အလှမျးစိတျကလေး ကပျပါသှားတယျ
"အိမျကိုတောငျ ဖုနျးမဆကျဖွဈအောငျ အလုပျမြားနလေား သားရယျ"
၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၁
Posted by Thi Ha Thu at 9:45 PM
ငါ့ကို နည်းနည်းကျွေးပါ။ ဟထားတဲ့ပါးစပ်ကြီးက ပြောတယ်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက ချောကလတ်တွေထုတ်ပြီး ပါးစပ်ကြီးထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ (၅)မိနစ်လောက်ကြာသွားတယ်။ ပါးစပ်ကြီးက ပြောပြန်တယ်။ ငါ့ကို နည်းနည်းကျွေးပါတဲ့။ ကောင်ကလေးက ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ထပ်နှိုက်တယ်။ ချောကလက် (၃) တောင့် ထွက်လာသေးတယ်။ ပါးစပ်ကြီးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ (၂)မိနစ်လောက် ကြာသွားတယ်။ ပါးစပ်ကြီးက ပြောပြန်တယ်။ ငါ့ကိုနည်းနည်းကျွေးပါ။ ဒီတစ်ခါ သူ့အသံက ပိုပြီး သာယာနာပျော်ဖွယ် ဖြစ်လာသလိုပဲ။ သတင်းထောက်တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ပါးစပ်ကြီးကို "ဖျတ်" ခနဲ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ ဒီလိုဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တော့ ပါးစပ်ကြီးက ပြုံးနေလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏပါပဲ။ ပါးစပ်ကြီးဟပြီး ပြောပြန်တယ်။ ငါ့ကိုနည်းနည်းကျွေးပါ။ ကောင်လေးက သူ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကို ကြိုးစားပမ်းစားနှိုက်တယ်။ မရှိတော့ဘူး။ ဘာမှထွက်မလာတော့ဘူး။ အော်... ပျံလို့မရတဲ့ အတောင်ပံနဲ့ ပိုးကောင်အသေတစ်ကောင် ထွက်လာသေးတယ်။ ကောင်လေးက ပါးစပ်ကြီးထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တာပါပဲ။ သတင်းထောက်က ကောင်လေးကို မေးတယ်။ မင်းပါးစပ်ကြီးထဲ ထည့်ကျွေးခဲ့တာ အားလုံး ဘယ်နှစ်ခုလဲ။ (၈) ခုနဲ့ (၁) ကောင်လို့ ကောင်လေးကဖြေတယ်။ ကောင်းပြီ။ သတင်းထောက်ဟာ ဟထားတဲ့ပါးစပ်ကြီးကို နောက်တစ်ကြိမ် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြန်တယ်။ "ဖျတ်" ခနဲ။ ဟထားတဲ့ ပါးစပ်ကြီးက ပြုံးနေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကြီးဟာ ပြန်ဟလာပြီး ပြောပြန်တယ်။ ငါ့ကိုနည်းနည်းကျွေးပါ။ အသံက ဂီတပိုဆန်လာတယ်။ အဲဒီအချိန် ကောင်လေးရဲ့အမေ ရောက်လာတယ်။ သားငယ် မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ ဟိုမှာကြည့်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုပြီး ကောင်လေးလက်ကို ဆွဲခေါ်သွားတော့တယ်။ သတင်းထောက်က ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့။ ငါ့ကို နည်းနည်းကျွေးပါ။ ဟထားတဲ့ပါးစပ်ကြီးက တိုးတိုးပြောရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ရဲ့။
၂၀၀၂၊ ၉၊ ၂၅
ည ၁၀း၁၀ နာရီ
စနေ နေ့တစ်ဝက် (၁၁)
ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်မယ့် အဖန်တလဲလဲငြီးငွေ့ရမှု
Posted by Thi Ha Thu at 1:01 AM
ဒါပေမယ့် သူက သွေးပျက်မှုတွေနဲ့
ညနေခင်း မင်းဆီမင်း ပြန်မလာမိရင်
အားလုံးကို သတိရှိရှိနဲ့ ဂိုးပေါက်ကနေ
ဂိုးတွေတော့ ဘယ်တော့မှ မပေးမိစေနဲ့
၄ သြဂုတ် ၂၀၁၁
Posted by Thi Ha Thu at 8:12 AM
ဒါပေမယ့် လိင် အသားအရောင်နဲ့ ဘာသာစကား
မကြာခဏ နေကောင်းသွားနိုင်တယ်/သရိုးသရီ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဒီနေ့ ဘာတစ်လုံးကောင်းလဲ မပြောတတ်သေးဘူး
ဒါပေမယ့် သေချင်တိုင်း သေမယ်ထင်လို့လား
လေးထပ်ပဲရှိတာ ခြောက်ထပ်လောက်မှ စိတ်ချရမယ်
Posted by Thi Ha Thu at 6:29 AM
မင်း ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ဓားနဲ့ စားမြိန်စားမှ မတတ်ဘဲ။
ခေါင်းကို ခဏခဏ ပြူမထုတ်ရတဲ့
ကဗျာနဲ့ အိပ်မက် ဆွေမျိုးဆက်တာ
ဒါနဲ့ အိပ်မက်တွေ ပြန်ပြန်အမ်းနေတာ
လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်ရေး အသိဥာဏ်ကို
ဘယ်လို ကုန်ခမ်းအောင် သုံးစွဲရပါသလဲရှင့်
Posted by Thi Ha Thu at 11:57 PM
ဒါဟာ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ပါ။ ကြွေကျသွားတဲ့ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ပါ။ သစ်ရွက်ဟာ မိခင်ပင်စည်ကြီးဆီက မခွဲခွာချင်သေးဘူးတဲ့။ မိခင်ပင်စည်ကြီးကို သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းလှတယ်။ အဲဒီ သံယောဇဉ်ကြီးသူ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ ဆောင်းလထဲမှာ ဖြုတ်ခနဲ ကြွေကျခဲ့ပေါ့။ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ ဆောင်းနှင်းလမှာ ကြွေကျခဲ့ပြီး၊ နှင်းတွေထဲဆီ လွင့်ပါးသွားခဲ့ရှာပေါ့။ မိခင်ပင်စည်ကြီးဟာ ကြွေသွားတဲ့သစ်ရွက်တစ်ရွက်အတွက် မျက်ရည်စိုခဲ့တယ်။ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ မိခင်ပင်စည်ကြီးရဲ့ ဝေးရာကို လွင့်ပါးသွားခဲ့ရပါတယ်။ နှင်းတွေ တအားကျတာပဲ။ ကျွန်တော် ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲ ပြောပြစမ်းပါ။ ဆောင်းလေတစ်ချက်ဝှေ့တော့ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ ဖလပ်ခနဲလန်သွားတယ်။ အခုသူရောက်နေတာက သူ့ကိုလူတွေ မတွေ့မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာပါ။ မြက်ပင်၊ ဖုန်မှုန့်နဲ့ နှင်းစက်တွေက သူ့ကိုလူတွေမတွေ့မြင်နိုင်အောင် ဝှက်ထားကြတယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ကိုယ်ထည်ထဲကို သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ ဝင်ရောက်ရပေလိမ့်မယ်။ ဖုန်မှုန့်တွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့။ ခုတော့ သူဟာ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ပါ။ ဆောင်းလေဟာ သူ့ကို ကုတ်ခြစ်စုတ်ပြဲစေပြီး နှင်းစက်တွေဟာ တအိအိ ဆွေးမြည့်စေလိမ့်မယ်။ သူဟာ ဆောင်းလေထဲမှာ နေ့ရက်များစွာ ဝိညာဉ်မဲ့ တရွတ်တိုက် သွားလာနေခဲ့တယ်။ ပိုးပုရွက်တွေဟာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ တရွရွနဲ့ ဆင်းချည်တက်ချည် လုပ်ကြတယ်။ မြေထဲက ပိုးကောင်ငယ်ကလေးတွေဟာ နှင်းတွေထဲမှာ စိုစွပ်ပျော့ဖပ်နေတဲ့သူ့ကို တရိရိ ကိုက်ဖြတ်ကြတယ်။ ဖုန်မှုန့်တွေက အရိုးအကြော ပြိုင်းပြိုင်းသာကျန်တော့တဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်စတစ်စ ဖုံးလွှမ်းလိုက်ကြပေါ့။ မြက်ပင်တွေဟာ သူ့ကိုယ်ထည်ကိုဖြတ်ပြီး ထိုးဖောက် ရှင်သန်လာကြတယ်။ သူဟာ တဖြည်းဖြည်း တရွေ့ရွေ့နဲ့ ဆွေးမြည့်ကာ မြေသားထဲကို ရောက်ရှိသွားပေါ့။ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့ကိုယ်ထည်ထဲကို ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့် ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီ။ ဖုန်မှုန့်တွေအဖြစ်နဲ့လေ။
Posted by Thi Ha Thu at 9:39 AM
ဆံပင်ရောင်စုံ ဆိုး မလို့လား!
ငါလည်း ငါ့အိမ် ငါ့လိပ်စာ ငါလိုက်ရှာရာ မတွေ့၊ မတွေ့
တယ်လီဖုံးခေါ်တယ်၊ ရတဲ့အခါ "ဟယ်လို ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ"
"MIND SCAPE ပန်းပု ပန်းချီပြပွဲ" ကြည့်ပြီးပြီလား
၂၀၁၁ နှစ်သစ် ရောက်ပြီလား။
ဟေ့လူ! ကပ်ဖ်ကာ....၊ ခင်ဗျားကို
"မြန်မာပြည်ကို လာဘို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်"*။ ။
*မြန်မာပြည် ခရီးသွားနှစ် သီချင်းမှတစ်ပိုဒ်
ကျွန်တော် ဖြေပါတယ်။ "ကျောရှိလို့တော်သေးတာပေါ့"
(ဖြေပါတယ် ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ် ၂မျိုးပါ)
ကျွန်တော်က အကောင်းမြင်သမားပဲ။ ။
အဲဒီပြဇာတ်မှာ ငါ ပါတယ်ကွ.."
ရှေ့နားခုံမှာ အမည်မသိ လူနှစ်ဦး
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ။
Mandalay ICON မဂ္ဂဇင်း
Posted by Thi Ha Thu at 8:20 PM
တစ်နံတစ်လျား အဆုံးမရှိ၊ အစမရှိ
စပ်ဆေးရောင်စုံ ခွက်များအပေါ်၊ လိမ့်လဲကျခဲ့
"မြန်မြန် လုပ်လိုက်လေ၊ ကောင်းလေ ပါ"
"ဟုတ်ကဲ့... ဆရာ၊ ကျွန်တော်...
မဟာခုန်ပျံကျော်လွှား ခေတ်ကြီးကို မီလိုက်ပါတယ်"
လျှောက်မလုပ်နဲ့၊ သူတို့ပြောတိုင်း လျှောက်မလုပ်နဲ့တဲ့၊
ငါ့ ငုတ်တိုလက်တစ်ဖက်ကိုသာ မင်း မြင်ပါစေသူငယ်ချင်း။ ။
ဇွန်လရဲ့နေ့လယ်ခင်းတစ်ခုထဲမှာ ပဲစေ့လေးတွေ သူမ ရွေးနေတယ်။ မနက်ခင်းက ဘူတာဈေးကလေးထဲက ဝယ်ယူလာတဲ့ ပဲစေ့ကလေးနှစ်ဘူးပါ။ ပန်းထဲမှာထည့်ပြီး ရွေးနေတယ်။ ပဲစေ့ကလေးတွေက ခရမ်းပြာရောင်လေးတွေ။ အဲဒီပဲစေ့ကလေးတွေထဲက အဖျင်းအပိန်အလိမ်လေးတွေ၊ မြေဆန်ခဲအစအနလေးတွေ၊ ကိုင်းဖျားကိုင်းနား အစအနလေးတွေကိုရွေးပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ လွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဆန်ပြည့်ဝတဲ့ ပဲစေ့တွေရပြီဆိုတော့ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါ ပြုတ်စားဖို့ပါ။ ဒီရက်တွေထဲမှာ မိုးက တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ် ရွာချလိုက်တယ်။ မြေဟာ အစိုဓာတ်ရလို့ အေးမြနေလေရဲ့။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ ပြတင်းပေါက်အောက်ဖက်ကြားကလေးထဲကို သူရောက်သွားတယ်။ အို... ကြည့်စမ်းပါ။ ပဲစေ့လေးတွေ အပင်ပေါက်ရှင်သန်ကြလို့။ သူမ စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ ပဲစေ့လေးတွေ။ သူမအမှုမထားခဲ့တဲ့ ပဲစေ့လေးတွေ။ သူမ စွန့်ခဲ့တဲ့ ပဲစေ့လေးတွေ။ သည်တစ်မိုးနှစ်မိုးမှာ သူတို့အပင်ပေါက်ကာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ထရပ်နေကြပေါ့။ သူတို့ကို အဖျင်းအမှော်တွေလို့ သူမသတ်မှတ်စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုသူတို့ ရှင်သန်နေကြပြီလေ။ စိမ်းမြတဲ့အရွက်ငယ်ကလေးတွေနဲ့။
၂၀၀၂၊ ၇၊ ၁၈
ည ၁၀း၃၀ နာရီ
Posted by Thi Ha Thu at 1:27 AM
ညဉ့်နက်နက် သန်းခေါင်ကျော်လောက်မှာ သူနိုးလားတယ်။ သူနိုးလာတော့ ခုတင်ပေါ်ကဆင်းတယ်။ ရေအိုးစင်ကိုမြင်တော့ ရေတစ်ခွက် ခပ်သောက်တယ်။ ပြီးတော့ ရပ်နေတယ်။ တစ်စက္ကန့် ... နှစ်စက္ကန့်၊ တစ်မိနစ် ... နှစ်မိနစ် ... သုံးမိနစ် ... သူရပ်နေတယ်။ ငါဘာလုပ်မလို့ပါလိမ့်။ သူစဉ်းစားမိသလိုလိုပဲ။ ခုတင်ပေါ်မှာ မိန်းမတစ်ယောက် (ခပ်ဝဝ) အိပ်နေတယ်။ ဘယ်ကမိန်းမလဲ၊ မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ။ အိပ်နေပုံက စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ သူတစ်ဖက်ကို လှည့်လိုက်တယ်။ နံရံမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ချိတ်ထားတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်(ပြုံးလို့) ခန့်ညားတဲ့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့။ ဒါကရော ဘယ်သူပါလိမ့်။ သူစဉ်းစားလို့မရတော့ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ သူအခုရောက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ ရပ်နေရမလား။ တံခါးဖွင့်ပြီး အပြင်ကိုထွက်သွားရမလား။ မသေချာဘူး။ စားပွဲပေါ်မှာ စီးကရက်အတိုတစ်ခုတွေ့တယ်။ သူကောက်ယူလိုက်တယ်။ ဘေးမှာမီးခြစ် သူကောက်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ သူစဉ်းစားလို့မရဘူး။ စားပွဲပေါ်ကို စီးကရက်နဲ့မီးခြစ် နှစ်ခုစလုံး ပြန်ချထားလိုက်တယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ သတင်းစာတစ်စောင်၊ သူဖွင့်ဖတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်လို့မရချင်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်နေ့ကသတင်းစာပါလိမ့်။ စစ်ပွဲတွေပြီးသွားပြီလား။ လူတွေဟာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလောက်အောင် မိုက်မဲနေကြတုန်းပဲလား။ ခုထိမိုက်မဲလို့ အားမရကြသေးဘူးလား။ ဟစ်တလာအခုထိ အသက်ရှင်နေတုန်းပဲလား။ နပိုလီယံက ဘာလုပ်နေသလဲ။ စစ်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်ပွားရင် သူကဘာလုပ်ရမလဲ။ ရပ်ကြည့်နေရမှာလား။ ဝင်တိုက်ရမှာလား။ ဝင်တိုက်ရရင် ဘယ်လိုဝင်တိုက်ရမှာလဲ။ သူ့အသိဥာဏ် ခဏနွေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဟာ... စစ်ပွဲကြီးပြီးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း (၅၀)လား ကျော်ခဲ့ပြီပဲ၊ မဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ပေါင်း (၆၀)ကျော်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ အင်း နှစ်ပေါင်း(၆၀)ဆိုရင် ငါကဘယ်အရွယ်ပါလိမ့်။ ခုငါ့အသက်က ဘယ်လောက်လဲ။ သူဟာ သူ့အသက်ကို စဉ်းစားလို့မရဘူး။ သူစဉ်းစားလို့မရတာနဲ့ သူမမှတ်မိတာတွေက များလှတယ်။ အခန်းထဲမှာရပ်နေရင်း စစ်ပွဲကြီးတွေ သူမေ့သွားခဲ့ပြီ။ ဘယ်တော့မှ သူမမေ့လျော့တဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိနေပြန်ရဲ့။ မီးဖိုဆောင်က စားပွဲပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို စားသောက်ပစ်ဖို့ပဲပေါ့။ အစားအစာတစ်ခုကို စားသောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာ ဆာလောင် နေချိန်ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်ဟာ နေ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ညဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နံနက်ခင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ညနေခင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်လေ။ မီးဖိုဆောင်က စားပွဲပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ပေါင်မုန့်ကို သူတစ်ဖဲ့ ဖဲ့လိုက်တော့ တစ်ခုခုကို သူအမှတ်ရလာတယ်။ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကို သူကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသလိုလို ထင်မြင်လာမိတယ်။ သူ့အစွမ်းကြောင့် ငါးမိနစ်အတွင်း လဲလျောင်းရင်းနေတဲ့ပေါင်မုန့်ဟာ ကုန်သွားတယ်။ သူအာသီသတစ်ခု ပြေသွားတယ်။ ထူးဆန်းတာက မီးဖိုဆောင်စားပွဲပေါ်မှာ ညစဉ်ညစဉ် ပေါင်မုန့်တစ်လုံး လဲလျောင်းခြင်းပဲ။ သူနည်းနည်းလန်းလာသလိုပဲ။ မီးဖိုဆောင်ကနေ တခြားအခန်းဖက်ကို သူရောက်လာတယ်။ အခန်းထဲမှာ မီးတွေလင်းနေတယ်။ စင်တွေ၊ ဗီရိုတွေနဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးလည်းရှိတယ်။ ဒါဟာစာဖတ်ခန်းပဲ။ သူက စားပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်ကို ဖွင့်ဖတ်တယ်။ ပါကင်ဆန်၊ အယ်လ်ဇိုင်းမား ဆိုတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတွေပြထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မှတ်စုတွေကိုတွေ့တယ်။ ဘယ်သူ့မှတ်စုလဲလို့ စဉ်းစားနေမိရင်း လက်ရေးဟာ သူအရင်းနှီးဆုံးလက်ရေးပဲလို့ ထင်မြင်လာမိပြန်တယ်။ စာအုပ်ကို သူပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူစာ မဖတ်ချင်ဘူး။ သူစာဖတ်ခဲ့ရင် တစ်ခုတစ်ခုသိလာမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသိမှုတစ်စုံတစ်ခုကို သူလက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူး။ နောက်ထပ် လေနည်းနည်းမှုတ်သွင်းလိုက်ရင် ကွဲထွက်သွားနိုင်လောက်တဲ့ ပူဖောင်းတစ်လုံးလိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီဥပမာဟာ သူ့အတွက် မှန်ချင်မှမှန်မှာပါ။ ဆိုလိုတာက သူ့ဆင်ခြင်သိမှတ်မှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက လေမရှိတော့တဲ့ ပျော့စိစိရော်ဘာပူဖောင်းခွံတစ်ခု။ ဒါမှမဟုတ် ပူဖောင်းအပိုင်းအစတွေလို ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေခဲ့မှာမို့လို့ပေါ့။ စာဖတ်ခန်းထဲက နီယွန်မီးရောင်အလင်းထဲမှာ သူငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်နေတယ်။ ထိုင်နေရင်း ဟိုဖက်ခန်းက အိပ်ပျော်နေတဲ့ (ခပ်ဝဝ)မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟောက်သံကို သူနားထောင်နေမိတယ်။
Posted by Thi Ha Thu at 10:08 PM
တဖြည်းဖြည်း သေဆုံးသွားတဲ့ သစ်ပင်
Posted by Thi Ha Thu at 9:58 PM
ငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့ မှန်ထဲက မျက်လုံးဟာအသည်းယားစရာ
မှန်အပြင်က ငါ့ခေါင်းကိုစမ်းကြည့်မိတယ်၊ ရှိသေးတယ်
ဒိုလေး၊ ဘက်ခမ်း၊ ဘန်ပါစီ၊ မက်စီ၊ ကာကာ
အဆိုတော်ဟာ သီချင်းဆိုရင်း စာသားမေ့သွားဟန်ရပ်တန့်
စဆိုတဲ့ စာသားက တီးလုံးရှေ့ ပြေးထွက်လာ
သရဲဆိုလို့ ညက သူကြည့်ခဲ့တဲ့ သူရဲကားအကြောင်း
ဆံသဆရာဟာ မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ စိတ္တဇလူသတ်သမားဆိုလား
သူကိုယ်တိုင်က ဆံသဆရာလား၊ စိတ္တဇဝေဒနာသည်လား
သူ့အမူယာတွေ လေယူလေသိမ်းတွေ ခွဲခြားရခက်လာ
တစ်ခြမ်းပြောင်၊ တစ်ခြမ်းမှောင်နေတဲ့ ငါ့ဦးခေါင်းနဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား
တကယ်တော့ဗျာ နံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ ကျားခေါင်းနေရာမှာ
ခင်ဗျားဆံပင်ပုံမျိုးနဲ့ လူဦးခေါင်းတစ်ခု ချိတ်ထားရမှာ
ဒါမှ ဆိုင်ရဲ့ကြော်ငြာဟာ ပေါ်လွင်မှာမဟုတ်လား
လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်လား
ဘုရား ဘုရား ဒီလူ အတည်ပြောနေတာများလား
သူ့ခြေထောက်ကို ပွတ်သပ်နေတဲ့ ကြောင်ကလေးကို ကန်ထုတ်လိုက်ပုံ
ကြောင်ကလေး ဘောလုံးတစ်လုံးလို လွင့်သွားပုံ
နံရံနဲ့ထိပုံ၊ ပြုတ်ကျလာပုံ၊ ကြောင်ကလေးညည်းညူနေပုံဟာ
သူ့မျက်နှာဟာ သူဘာမှ မလုပ်လိုက်သလိုမျိုး အေးစက်
အေးဆေး တိကျ မြန်ဆန်လွန်းတယ်
သူ့မျက်နှာရှေ့ တဝီဝီပျံသန်းနေတဲ့ ယင်ကောင်ကို ပိုင်းချလိုက်ပုံဟာ
ငါ့ ဝတ်ရုံအဖြူပေါ် ပြုတ်ကျလာတဲ့ ယင်ကောင်တစ်ပိုင်းဟာ
ငါ့ဆံပင်နဲ့ရောထွေးလို့ တောင်ပံတစ်ဖက် ခတ်နေတုန်းပဲ
ငါ့ ကုတ်ပေါ်မှာ ဆံပင်မရှိတော့ဘူး
ငါ မျက်တောင်မခတ်ရဲဘူး မျက်တောင်တွေပြတ်ကျမှာစိုးလို့
ငါ မျက်စိမမှိတ်ရဲဘူး မြင်ကွင်းတွေပြတ်ကျမှာစိုးလို့
ထွက်ပြေးတဲ့ ငါ့စိတ်ဟာ ငါ့ခန္ဓ္ဓာထဲကထွက်မရဘူး
တဖျတ်ဖျတ်ခတ်နေဆဲ ယင်ကောင်တစ်ပိုင်းကို ကောက်ယူပြီး
သူ့အပြုံးဟာ ပန်းပွင့်သလို အနှေးပွင့်လို့
စိတ္တဇလူသတ်သမားလိုလို မျက်လုံးဟာ အေးစက် မာကျော တောက်ပ
နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်းစေ့လို့ မှန်ထဲက ငါ့မျက်လုံးကို
Idea မေလ၊ ၂၀၀၉
ကြည်လင်သောရေတံခွန်၊ ပကြိမ်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၁
Posted by Thi Ha Thu at 2:16 PM
ဦးခေါင်းမီးစွဲလာတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်။ ။
*မြို့အူသံ။ ။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ အခြေပြုပဌာန်းစာအုပ်မှ
Posted by Thi Ha Thu at 1:03 PM
မှန်စာတိုက်ထားတဲ့ကြိုးနဲ့ စွန်မလွှတ်ကြပါနဲ့ လေညင်းလေးတွေ နာကျင်မှာစိုးရဲ့
ဒီကြိုးနဲ့ ဒီစွန်လေးဟာ ထာဝရဆက်သွယ်ခြင်းလို့
ဖေဖေဟာ အရာရာကို အောင်နိုင်သူလို့
တွေးထင်ထားတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတစ်စုံ၊ ပျော်လို့
သူ့မျက်ဝန်းမှာ အံ့သြတဲ့ နားမလည်ခြင်း
ကျွန်တော်နဲ့သား လွင့်ငေး၊ ငေးနေရ
ပြတ်သွားတဲ့စွန်ကလေးကို စိတ်နဲ့ လိုက်ဆယ်နေကြ
သားက စွန်မပါတော့တဲ့ ရစ်ဘီးကလေးကိုကိုင်လို့။
(သားငယ်လေးစွန် စ လွှတ်သောနေ့ အမှတ်တရ)
ရတီ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၄
Posted by Thi Ha Thu at 12:49 PM
ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး မြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတယ်လို့ သတင်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က မယုံပါဘူး။ ကျွန်တော် မယုံဘူးဆိုတာ အဖြစ်အပျက်ကို မယုံတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဆင့်ခံသတင်းတွေကို မယုံတာပါ။ ဒီခေတ်ဒီအခါမှာ ဘယ်အဖြစ်မပျက်မဆို ဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော် လက်ခံထားပြီးသားပါ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး မြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတယ်တဲ့။ လူတွေဟာ ကဖေးဆိုင်မှာ ဒီသတင်းကို ပြောဆိုနေကြတယ်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် လူစုစုမှာလည်း ဒီသတင်းကို ပြောဆိုနေကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ် တနင်္ဂနွေည သန်းခေါင်လောက်မှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး နိုက်ကလပ်ထဲကိုဝင်သွားပြီး ခန်းမလယ်မှာရပ်နေတယ်တဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ နိုက်ကလပ်ထဲမှာ တော်တော်ကြာကြာ ရပ်နေခဲ့သတဲ့။ နိုက်ကလပ်ရဲ့ သန်းခေါင်ကျော်ခဲ့ချိန်မှာ အထဲကလူတွေဟာ သူတို့ခံစားမှုကလွဲလို့ ဘာကိုမှ အရေးမလုပ်ကြတော့ဘူး။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးကိုလည်း စိတ်မဝင်စားကြဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ နိုက်ကလပ်ထဲမှာ ဖြန့်ထားလျက်ပါပဲ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ နိုက်ကလပ်ထဲက လူတွေအကြောင်းကို တွေ့သိမြင်ခဲ့သူတစ်ဦးက ခုလိုပြောပြပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ နိုက်ကလပ်ထဲမှာ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ရှိနေခဲ့သတဲ့။ နံနက်လင်းအားကြီးအချိန်လောက်မှ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ နိုက်ကလပ်ထဲကနေ အပြင်ကို နောက်ပြန်ရွေ့လျားပြီး ထွက်ခွာသွားပါတယ်တဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး တစ်ခုခုမရပဲ တစ်နေရာရာက ဘယ်တော့မှ မထွက်ခွာဘူးတဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး နိုက်ကလပ်ထဲကနေ သီချင်းတစ်ပုဒ် (ငါတို့ အမှောင်ထဲမှာ ဆုံကြမည်) ဘီယာတစ်ဖန်ခွက်၊ အပျိုစင်နောက်ဆုံးညတစ်ည၊ နှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့်နဲ့ ဂိတ်စောင့်အဖိုးကြီးရဲ့ တုတ်ကောက်တစ်ချောင်းကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ မြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတယ်လို့ လူတွေပြောနေကြလျက်ပဲ။ ဒါတွင်သာမက လူတစ်ယောက်ဟာ မြို့ပြင်က မြစ်ကမ်းတစ်ခုမှာ ငါးထိုင်မျှားနေသတဲ့။ သူဟာ ငါးသုံးလေးကောင်ကိုလည်း မိထားပြီတဲ့။ သူဟာ ငါးမျှားတံမှာ ငါးစာကိုတပ်ပြီး ငြိမ်သက်မှုနဲ့ ငါးကို မျှားနေတာပေါ့။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သူ့နောက်ကျော်ဘက်ကို ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရောက်လာတော့တယ်။ သူဟာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး သူ့နောက်မှာ ရောက်နေတာကို မသိဘူးတဲ့။ ငါးစာကို ငါးက ဟပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာ ဆတ်ခနဲ ဆွဲတင်လိုက်တယ်။ ငါးဟာ ငါးမျှားချိတ်မှာမိပြီး လေထဲမှာကိုင်းညွတ်ကာ နောက်ဖက်ကိုကျသွားတယ်။ သူ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲမှာ ဖျပ်ဖျပ်လူးနေတဲ့ငါးကို တွေ့ရတော့တာပါပဲ။ သူက တစ်ခုခုပြုမူဖို့ ကြံရွယ်နေစဉ်မှာပဲ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ နောက်ပြန်ဆုန်ပြီး မြို့ဘက်ကို ထွက်ခွာသွားတော့တယ်တဲ့။ ဖျပ်ဖျပ်လူးနေတဲ့ ငါးဟာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲ ပါသွားတော့တာပေါ့။ တစ်ရက်ကလည်း မနက်စောစောစီးစီး ဈေးထဲမှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး လျှောက်သွားနေတယ်တဲ့။ လူတွေက သူတို့ကြားရောက်လာတဲ့ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးကို တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ ရှောင်ရှောင်တိမ်းတိမ်း သွားနေကြသတဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ဝက်သားဆိုင်၊ ဆိတ်သားဆိုင်၊ ဆူးပုပ်ရွက်ဆိုင်၊ ပုစွန်ခြောက်ဆိုင်၊ ငံပြာရည်ဆိုင်၊ သံပုရာသီးဆိုင်တို့ကို တရွေ့ရွေ့ဖြတ်လာသတဲ့။ အားလူးဆိုင်ရှေ့မှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ခဏရပ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးတော့ ရှေ့ကိုထွက်ခွာပြီး ဈေးပေါက်က သူတောင်းစားတစ်ယောက်ဆီမှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရပ်သွားတော့တယ်တဲ့။ သူတောင်းစာက အဝါးရခက်တဲ့ ပေါင်မုန့်တစ်လုံး ထည့်ပေးလိုက်မှ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ဈေးကနေ ထွက်ခွာသွားတော့တယ်တဲ့။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးအကြောင်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုပြီး ပြောလာကြတယ်။ ဆေးရုံကြီးဝင်းထဲက ကင်ဆာဆောင်ရှေ့မှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးကို တွေ့လိုက်ကြသတဲ့။ မြို့ရဲ့မြင့်မားလှတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးသတ်မျှော်စင်ထိပ်မှာလည်း ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးကို တွေ့မြင်မိကြသတဲ့။ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားရဲ့ မုခ်ဝတစ်ခုမှာလည်း ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရောက်နေတာကို ဘုရားဖူးသူတွေ မြင်လိုက်ကြသတဲ့။ မြို့ရဲ့ လူစည်ကားလှတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေ တစ်ဝိုက်မှာလည်း ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရွေ့လျားနေတာကို တွေ့ခဲ့ကြသတဲ့။ နာရီစင်အောက်မှာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရပ်နေတာကိုလည်း အတော်များများ တွေ့ခဲ့ကြကြောင်း ပြောဆိုနေကြတယ်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံဆုံရမှုဟာ သတင်း တစ်ခုကို တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်အဖြစ် လက်ခံ ယုံကြည်လိုက်ရပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ မနေ့ညက အချိန်းထဲမှာ ကျွန်တော်စာဖတ်နေစဉ် ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး ရောက်ရှိလာခဲ့လို့ပဲ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာပိတ်ထားတဲ့အခန်းပြတင်းနံရံကို တအိအိတိုးဝင်ဖြတ်သန်းပြီး ကျွန်တော် စာဖတ်နေတဲ့စားပွဲနားကို ရောက်လာပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ အရွယ်အစား အတော်ကြီးပါတယ်။ အရောင်က ကြေးညိုရောင်ပါ။ မွန်ဂိုလွိုက်အနွယ်တွေရဲ့ အသားအရေမျိုးနဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲမှာ ဥာဏလေခ၊ အာယုလေခတို့ဟာ သိသာထင်ရှားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အားကောင်းလှတယ်လို့လည်း ထင်မှတ်မိပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲမှာ ဟဒယလေခကိုတော့ တိုတောင်းတဲ့မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းသဏ္ဌာန်သာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သည့်ထက်ပိုပြီး ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ ထူးခြားတာကတော့ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ပြည့်အိဖြိုးမောက်တဲ့ အသားအရေတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါပဲ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတွေ သတိရလာတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ တစ်ခုခုထည့်မပေးမချင်း မထွက်ခွာဘူးဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ စာဖတ်နေရာကနေ စာအုပ်ကို စားပွဲပေါ်ချ ဦးခေါင်းကိုငဲ့ပြီး ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးကို ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ခပ်ကြီးကြီးစကောတစ်ချပ်အရွယ်တော့ ရှိလိမ့်မယ်။ ကြမ်းပြင်အထက် လေထဲမှကြွပြီး တည်ကာ ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက တစ်ခုခုယူဖို့ ရောက်လာစမြဲပဲဆိုတာ ယုံတမ်းစကားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ကျွန်တော့်ဆီက ဘာကိုယူဖို့အလိုရှိသလဲ။ ကျွန်တော်က ကုလားအုတ်တံဆိပ်စီးကရက်ကို ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ စီးကရက်ကိုကောက်ယူပြီး လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကြားမှာ ဖိညှပ်ကာ ခြေမွပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဘယ်သူ့ဆီက ဘယ်အချိန်မှာ ဘာကိုယူရမယ်ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ပုံရတဲ့ လက်ဝါးကြီးဟာ စီးကရက်အကြွေတွေကို ခါချပြီးရပ်နေပါတယ်။ လေထဲမှာ ကြွနေလျက်နဲ့ပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ အံဆွဲထဲက ဓားမြှောင်ကိုထုတ်ယူပြီး ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးရဲ့ အလက်ကောင်တည့်တည့်ကို စိုက်ချလိုက်ရမလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ကြီးမားသန်စွမ်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မှာ အလွန်ကြွယ်ဝတဲ့ အတွေ့အကြုံလည်းရှိပုံပါ။ ကျွန်တော်ဟာ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးထဲကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲက အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးအရာတစ်ခုခုကို ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲက အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးအရာတွေကတော့ -၁။ လူငယ်ဘဝ ၂၊ ကဗျာတွေ ၃၊ ထွန်ယက်ထားတဲ့ဝိညာဉ် ၄။ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ၅။ ကိုယ်ကျင့်တရားတို့ပါပဲ။
အဲဒီနေ့ကစပြီး ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ကျွန်တော့်ဆီကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်မလာတော့ပါဘူး။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးမြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းမှိန်ဖျော့တိုးတိတ်သွားပါပြီး။ အဲဒီသတင်းကိုပြောသူ တစ်စတစ်စနဲ့ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ လူတွေ မေ့သွားကြပါပြီ။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီးဟာ ဝေးလံလှတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များမှာ လှည့်လည်နေမလားလို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက အဖိုးအထိုက်တန်ဆုံး အရာတစ်ခုကိုလည်း သူယူဆောင်သွားခဲ့ပြီ။ ခုချိန်မှတော့ ကျွန်ုပ်ဟာ အရက်စွဲနေတဲ့ အဘိုးအို တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ခါးတွေ ကိုင်းခဲပါပြီ။ ကျွန်ုပ်နားတွေ ထိုင်းခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မျက်စိတွေ မှုန်မှိုင်းခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ဆံစတွေလည်း ဖြူခဲ့ပေါ။ ကျွန်ုပ်လက်တွေဟာ အမြဲလိုလို တုန်ယင်နေကြတယ်။ အိမ်အိုဟောင်းကလေးထဲကနေ အပြင်ကိုငေးလို့ ကျွန်ုပ်စောင့်ကြည့်နေမိတယ်။ ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဝါးကြီး နောက်တစ်ကြိမ် ရောက်လာမယ့်နေ့ကိုလေ။
၂၀၀၃၊ ၄၊ ၁၉
နေ့လယ် ၂နာရီ (၅မိနစ်အလို)
Posted by Thi Ha Thu at 10:45 AM
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရွှေတွင်းကို သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ရွှေတွင်းကို သူပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူဟာ ရွှေတွင်းဘေးမှာ တဲကလေးတစ်လုံး ထိုးတယ်။ အဲဒီတဲကလေးကနေ ရွှေတွင်းကို စောင့်ကြည့်တယ်။ အလုပ်သမားတွေ သူတို့မြို့ရွာဇာတိကို ပြန်သွားကြပြီ။ စက်ရုံတွေရှိရာ၊ လယ်ကွင်းတွေရှိရာကို ပြန်သွားကြပြီ။ ခြေတစ်ဖက်ပြတ်ပြီး မသန်မစွမ်းဖြစ်နေတဲ့ အလုပ်သမားအိုကြီးတစ်ယောက်သာ ကျန်ခဲ့တယ်။ အလုပ်သမားအိုကြီးဟာ ချိုင်းထောက်တစ်ဖက်နဲ့ ထောက်ကာထောက်ကာ သူ့အနားကို ရောက်လာတယ်။ ဆရာလေး သိပ်အေးလာပြီ ရော့ ... ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်လိုက်ဦးဆိုပြီး သူ့ကိုပေးတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ညနေစောင်းတာနဲ့ နှင်းတွေတဖွဲဖွဲ ကျဆင်းလာပြီလေ။ လေဟာညင်ညင်သာသာ တိုက်ခတ်နေပေမယ့် အေးစိမ့်လှတယ်။ စွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ သံခမောက်တွေ၊ ကာဗိုက်မီးခွက်တွေ၊ တောစီးဖိနပ်တွေဟာ နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေတယ်။ ပြေးလမ်းပေါ်မှာ ထရော်လီတွေ ရပ်နေတယ်။ သံမဏိကြိုးတွေ တွဲလောင်း။ ပစ်ချထားတဲ့ ဂေါ်ပြားတစ်လက်ထဲမှာ ရွှေတွေ ဂေါ်တစ်ဂေါ်စာ ဝင်းလို့။ ရွှံ့စေးမီးဖိုထဲက မီးခိုတွေအူထပြီး၊ မိုးကောင်းကင်ဆီ တလွင့်လွင့်တက်သွားနေတယ်။ သူဟာ ဒီရွှေတွင်းရှိရာကို နှစ်များစွာ ကြိုးစားပြီး အရောက်လာခဲ့တယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် သူကြိုးစားခဲ့တယ်။ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ မြေကြီးကို သူတူးခဲ့တယ်။ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ မြေကြီးကို သူတို့တူးခဲ့တယ်။ ခုတော့ ရွှေတွင်းကို သူပိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အလိုရှိသလောက်ရွှေတွေ သူထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း အလုပ်သမားတွေ သူ့ကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်။ နှင်းတွေ ဆက်ကာဆက်ကာ ကျလာပေါ့။ ရွှံ့စေးမီးဖိုကလေးက မီးခိုးငွေ့တွေဟာ တလွင့်လွင့်တက်ပြီး နှင်းတွေထဲမှာ ရောယှက်နစ်မြုပ်သွားတယ်။ သူဟာ ကော်ဖီတစ်ငုံ ငုံလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရွှေတွင်းကို နှမြောတသစွာ စိုက်ငေးကြည့်နေလေရဲ့။
၂၀၀၂၊ ၉၊ ၂၇
ည ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ်လို
Posted by Thi Ha Thu at 9:39 PM
ဆေးခန်းကနေ သတင်းကောင်း ရှင် ကျွန်မဆီယူလာတယ်
ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ပြောလို့ အခု ကောင်းသွားပြီတဲ့။
ကျွန်မကို ငှက်ပျော်သီးဓါတ်ငွေ့ ကျွေးဖူးတယ်။
ပြီးတော့ အမေဟာ ကူးပြီးရောက်လာတယ်
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ တော်တော် နေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာလေ။
အဲဒါတွေကို သူတို့အကုန်လုံး ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။
ခန်းမြှောင်တစ်ခန်းဆီ ကျွန်မ လိမ့်ဝင်သွားတယ်။
အဲဒီမှာ သနားကြင်နာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်
ကျွန်မ လက်ချောင်းတွေကို လက်သီးဆုပ်ပေးတယ်
ခံစားမိစေတယ်။ 'တစ်' ကနေ 'နှစ်' လို့ ရေလိုက်တာနဲ့
သင်ပုန်းပေါ်က မြေဖြူတွေလို ဖျက်လိုက်တယ်
ငါးရက်လုံးလုံး ကျွန်မ လျှို့ဝှက်စွာ အိပ်စက်
နှစ်ပရိစ္ဆေဒတွေဟာ ကျွန်မ ခေါင်းအုံးထဲ စီးဆင်းသွားကြတယ်။
ကျွန်မ နယ်သွားနေတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။
အရေပြားမှာ ဘာအမြစ်မှ မရှိဘူး၊
စက္ကူစလို အလွယ်တကူ ခွာယူပစ်လိုက်လို့ရတယ်။
ကျွန်မ အားရပါးရ ပြုံးတဲ့အခါ
အခု ကျွန်မအသက် ၂၀
သေနေတဲ့ ပူဒယ်လ် အမွေးစုတ်ဖွားခွေးရဲ့
သိုးမွေးလို အမွေးထဲ နှစ်မြုပ်လို့။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ ကြောင်မမွေးသေးဘူး။
အခု ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်နေတာ သူမပေါ့
ကျွန်မ ကြည့်နေတဲ့ ကြေးမုံထဲ တစ်ကြောင်းပြီးတစ်ကြောင်း
လက်ချုပ်လိုက်တဲ့ ဖုလုံးပေါ်မှာ အရေခွံအိတွဲကျ။
သူမကို သူတို့ ချောင်ပိတ်ဖမ်းထားလိုက်ကြပြီ
သေပလေ့စေ အဲဒီမှာ သူမ
အဆက်မပြတ် ရှုံ့တွလှီကျုံ့ သွားပလေ့စေ
ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ် ကိုယ်ကို ရှေ့နောက်လွှဲနေပြီး
ပြောင်သလင်းခါတော့မယ့် ဆံပင်ကို လက်ချောင်းတွေနဲ့
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ မိခင်ပဲ ကျွန်မကတော့
၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၆၁
ဆစ်လ်ဗီယာ ပလာ့သ် ဘဝ၊ ဆစ်လ်ဗီယာ ပလာ့သ် ကဗျာ
ဆောင်းရာသီ ရှုမျှော်ခင်းနှင့် ကျီးအ များ
အနက်ရောင် ရေကန်ထဲ ဒရဟောစီးဝင်တယ်။
နှင်းလို အကျင့်သီလစင်ကြယ်စွာ ရေပေါ်မှာ ညင်သာရွေ့လျား။
ပို မခံချိမခံသာ ခံစား။
လိမ္မော်ရောင် ဆိုက္ကလော့(ပ်) ဘီလူးမျက်လုံးတစ်လုံး
ကျွန်မဟာ ကျီးအ တစ်ကောင်လို
ဆောင်းည တဖြည်းဖြည်း ကျလာပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီရဲ့ ကျူပင်တွေ
ရှင့်ရုပ်ပုံဟာလည်း ကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာ အဲသလိုအတိုင်း။
ကျွန်မ နာကျင်မှုရဲ့ ပြတင်းပေါက်က မှန်သားပေါ့။
ဘာ သက်သာစရာ ထွင်းယူရရှိနိုင်မှာလဲ။
ဘယ်သူ လျှောက်လှမ်းချင်မှာလဲလေ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:21 AM
တင့်တောင်းတင့်တယ် နေထိုင်မှု ကန့်လန့်ကာကို
ကျီးအ တွေ အာလို့။
ရှင် ပြန်ဖာထေးလို့ ရနိုင်တော့မှာလဲ။ ။
Posted by Thi Ha Thu at 12:03 AM
ချစ်ခြင်းမေတဿတာဟာ သားကို သွားစေပြီ။
သားရဲ့ ခြေဖဝါးတွေကို ဝမ်းဆွဲဆရာမက
သားရဲ့ အဆင်တန်ဆာမဲ့ အော်သံဟာ
မေမေတို့ရဲ့ စကားသံတွေဟာ ပဲ့တင်ပြန်၊
လေဝင်လေထွက် ကောင်းတဲ့ ပြတိုက်ထဲမှာ
မေမေ နားထောင်ဖို့ နိုးထတယ်။
အဝေးက ပင်လယ်ပြင်ဟာ ရွေ့လျားလို့။
အော်သံတစ်ချက်၊ အိပ်ရာပော်က မေမေလူးလဲထ၊
မေမေ့ ဝိတိုရိယခေတ် ညဝတ်အကဿငျီအောက်မှာ
မေမေဟာ နွားမတစ်ကောင်လို လေးလံပြီး
ဖြူဖွေးလာပြီး သူ့ရဲ့ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်း
ဟော... သားလေးရဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ
ဂီတ သကေဿငတတွေကို သားစမ်းပြီ။
ပူဖောင်းတွေလို ပျံတက်လာကြတယ်။ ။
၁၉၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ၊ ၁၉၆၁
Posted by Thi Ha Thu at 11:11 AM
မထူးတော့ဘူး၊ အခုမှ မထူးတော့ဘူး
နာမည်၊ အိမ်၊ ကားသော့တွေ၊
ခရီးတွေ ခရီးတွေ ထွက်ကြမယ်။
၂၁၊ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၆၂
Posted by Thi Ha Thu at 9:31 PM
မကြာခင်မှာပဲ သားလေး သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်
သစ်တစ်ပင်လို သားနံဘေးမှာ ကြီးထွားလာနေတဲ့
ဦးထိပ်မှာ အရွက်တွေမဲ့၊ လျှပ်စီးရဲ့ ကွပ်ခြင်းခံရ-
ပြီးတော့ ဘာကိုမှ လုံးလုံးဂရုမပြုတဲ့
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သားလေးဟာ နှုတ်ကလေးအ,လို့
အဲသလို ထုံအ,တာကိုပဲ အမေချစ်တယ်
အဲဒီ ထုံ အ,ခြင်းရဲ့ စုံလုံးကန်းနေတဲ့မှန်။
အမေ့မျက်နှာကလွဲလို့ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မရှိဘူး။
အဲဒါ ရယ်စရာလို့ သားလေး ထင်နေတယ်။
သားလေးရဲ့ အပြုံးတွေဟာ အမေ့အတွက်
၂၆၊ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၆၂
Posted by Thi Ha Thu at 9:45 AM
အောက်ခြေကြမ်းပြင်ကို သူမ သိသတဲ့။
သူမရဲ့ ရေသောက်မြစ်နဲ့ သိသတဲ့၊
အဲဒါကို ကျွန်မ ကြောက်နေတာတဲ့။
ကျွန်မ မကြောက်ပါဘူး၊ ကျွန်မ ရောက်ဖူးပြီးသားပဲ။
ကျွန်မထဲမှာ ရှင်ကြားရတာ ပင်လယ်လား၊
ဒါမှမဟုတ် ရှင့်ကို ရူးသွပ်စေခဲ့ဖူးတဲ့
နားထောင်၊ အဲဒါ သူ့ခွာသံတွေပေါ့၊
တစ်ညလုံး ကျွန်မ ကဆုန်ပေါက်ပြေး၊
ကျွန်မ စိတ်ထင်သလို အတိုင်းပဲပေါ့၊
ဒီ ကြီးမားတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုကြီး။
အဲဒီ ကြီးမားတဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုကြီးရဲ့
ကျွန်မရဲ့ အနီရောင် နန်းကြိုးမျှင်တွေ
ကျွန်မ အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ပြိုကွဲပြီ၊
ဟိုဒီ ပျံဝဲကြတဲ့ တင်းပုတ်တွေ။
လမှာလည်း အကြင်နာစိတ်တစ်စက်မှ မရှိဘူး၊
ကျွန်မ ဖမ်းဆီးရမိပြီ ထင်တယ်။
သူမကို ကျွန်မ လွှတ်လိုက်တယ်။
သူမကို ကျွန်မ လွှတ်လိုက်တယ်
ကျွန်မရဲ့ ပင်ကိုယ်တွေလို ပေးအပ်တယ်။
ဒါဟာ ဘာလဲ၊ ဒီမျက်နှာ
၁၉၊ ဧပြီ၊ ၁၉၆၂
ပင်လယ်မဂဿဂဇင်း၊ အမှတ် (၁)
ဆယ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျွန်မ လုပ်တယ်-
ကျွန်မကို အုပ်ထားတဲ့ ပဝါကို
နှာခေါင်း မျက်တွင်း၊ သွားတွေ
ကျွန်မဟာ ပြုံးနေတတ်တဲ့ မိန်းမ
အသက်ကလည်း သုံးဆယ်လေးတင် ရှိသေးတယ်။
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစီကို ဖျက်ဆီးပစ်ရတာ
ဒါတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေ
ဒါတွေဟာ ကျွန်မရဲ့ ဒူးခေါင်းတွေ
လောလောဆယ် အရိုးပေါ် အရေတင်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး
ယခင် မိန်းမ ပကတိပဲ။
အဲဒါ မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့တာ။
ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့အောင် လုပ်ခဲ့တာ။
ကျွန်မကို ကျွန်မ ပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်တယ်။
သူတို့ ကျွန်မကို အော်အော်ခေါ်ရ
ချွဲကျိကျိ ပုလဲလုံးတွေလို သူတို့ခွာပစ်ရသတဲ့
ဒါမျိုးဆို ကျွန်မ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်တတ်တယ်။
အစစ်အမှန်လို ခံစားရအောင် လုပ်တတ်တယ်
ကျွန်မရဲ့ ပါရမီပဲလို့ ပြောလို့ရမယ် ထင်ပါရဲ့။
မြေအောင်ခန်းလေးထဲမှာ လုပ်ရတာ လွယ်တယ်
လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ နေရတာ လွယ်တယ်
အဲဒီ ယခင်နေရာ အဲဒီ ယခင်မျက်နှာ
ကျွန်မရဲ့ အမာရွတ်တွေ ကြည့်ရဖို့
ကျွန်မရဲ့ နှလုံးခုန်သံကို နားထောင်ဖို့
ကျွန်မ အသားကို ထိရဖို့အတွက်
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မရဲ့ သွေးတစ်စ
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မရဲ့ ဆံခြည်တစ်မျှင်
အဲဒီတော့၊ အဲဒီတော့၊ ဟာ(ရ်)ဒေါက်တာ
ကျွန်မဟာ ရှင့်ရဲ့ အဖိုးတန်ဆုံး၊
ဟိုဘက် ဒီဘက် ကျွန်မ လှည့်စောင်းပြီး
ရှင့်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ စိုးရိမ်မ၍ကို
ကျွန်မ လျှော့တွက်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။
ရှင် ထိုးလိုက် ဆွလိုက်လုပ်နေတာ
အသား၊ အရိုး ရှိမှ မရှိတာပဲ-
မဂဿ လာဆောင် လက်စွပ်တစ်ကွင်း
Posted by Thi Ha Thu at 11:09 PM
မှန်စာတိုက်ထားတဲ့ကြိုးနဲ့ စွန်မလွှတ်ကြပါနဲ့ လေညင်းေ...